Imisebenzi e-Dubai 2019 Izindlela Nokucwaninga Kwezemisebenzi e-UAE 🥇
Ukuqashwa kwefoni yeselula e Dubai
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at November 21, 2017
Imisebenzi e-Dubai Faka isicelo sokusebenza
Imisebenzi ku Dubai Faka isicelo somsebenzi ekhuluma sebenze phesheya e-UAE. Izikhathi zokukhethwa kwemisebenzi emsebenzini e Dubai futhi eMiddle East sekuvele kuguqukile. Ngokwengxenye enkulu ngezinsuku zeminyaka ukuthola okusha umsebenzi uphume eyunivesithi. Futhi hlala ngokwesibonelo ngemisebenzi yokufundisa eDubai noma imisebenzi yayo eDubai kuze kube yilapho umhlalaphansi usuqediwe. Ukuze uthole izikhala ezintsha eDubai ngethemba lokuthi kulomhlaba wanamuhla uzothola umsebenzi omusha.
Njengomfanekiso womphakathi omphakathi ofuna umsebenzi eDubai inkampani yethu izama ukubasiza ukuthi bathole imisebenzi. Iningi labo Umsebenzi wase Dubai abafuna, ngenxa yalesi sizathu, badinga ukuba nesipiliyoni esihle sokusebenza futhi bazivumelanise nezimo ngokushesha. Ukubeka ngenye indlela, kudingeka bakwazi ukuthola imisebenzi emisha neyakamuva IDubai 2019 lapho ingathola khona amathuba emisebenzi amasha.
Ngakho ngenxa yalesi sizathu inkampani yethu ngenxa yalokho ukusiza ukuthola noma yikuphi umsebenzi e-Dubai. Ngamanye amagama, ungabheka ucwaningo lwethu namasu akho imisebenzi e-Gulf amazwe. Dubai City Inkampani ilawula zonke izinto ezibhekelwe zona ukusesha umsebenzi. Kunikezwe wonke la maphuzu aphuma efuna umsebenzi e-Dubai.
Kepha ngokuhamba kwesikhathi, wonke umuntu ofuna umsebenzi kufanele abe nophumelelayo futhi athuthukise nenqubekela phambili indawo. Nakanjani, embhalweni wethu, uzothuthukisa i-UAE, Futhi-ke, ulwazi oluhle kakhulu futhi uzobe uluthola amathuba emisebenzi e-Dubai. Ukuqhubekela phambili kokucwaninga nokucwaninga okujulile, ekuhlaziyweni kokugcina, kuyindlela engcono kakhulu yokusebenza futhi imakethe yomsebenzi e-UAE.
Izinsuku ezintsha zokuthola Imisebenzi e-Dubai
Nakuba lokhu kungaba yiqiniso thola umsebenzi e-Dubai akulula lokho ku-2019. Kubaluleke kakhulu ukuqaphela kodwa iningi lezindlela ezijwayelekile kanye namaqhinga ukuvula amathuba emisebenzi e Dubai yehlulekile. Njengoba unikezwe la maphuzu, qhubeka futhi uhlole ukuthandwa Izindawo zokusebenzela zase-Dubai. Ngemuva yezindlela zakudala, imisebenzi yamanje ku UAE yaqala ukukhuphukela ekudumeni. Ayikho indlela eyengeziwe yokuthola imisebenzi etholakalayo ku Dubai lanoma yiliphi izwe ababheke ngokujwayelekile ukuqasha izinketho ephephandabeni. Noma ngisho ukucinga izikhangiso zosuku ukuze uthole umsebenzi wabo wephupho. Kuze kube manje Ukunikezwa komsebenzi e-Dubai ku-98% manje seyi-intanethi. Ngenxa yalesi sizathu, iningi lethu International abafuna umsebenzi baba ezintsha futhi babambe amasu amasha wokusebenza kwabo okukhohlisayo nemisebenzi phambili.
Ngenhloso ye kukusiza ukuba uthole umsebenzi ku-UAE. Inkampani yethu ikhiqiza izeluleko ezithandwayo zokufuna amathuba emisebenzi. Yile ndlela abanye abazingeli bemisebenzi ngifuna imisebenzi e-UAE. Izindlela ezintsha zokuthola umsebenzi eDubai sezivele zifikile Emirates. Futhi lokhu Umsebenzi wefoni weselula e-Dubai. Manje ungasesha umsebenzi wakho wephupho ku-android yakho.
Ungathola kanjani amathuba okuba umsebenzi e-Dubai nokuthi uzothatha isikhathi esingakanani?
Ngenhloso, inkampani yethu iyakwazi ukukusiza ukuthola amathuba emisebenzi e-Dubai. Njengomfanekiso womoya waseDubai ngaphezulu kwe-300,000 kuze kufike kubaphathi be-500,000 abaphathi abeza e-United Arab Emirates. Ukubeka ngenye indlela, bonke bafuna thola imisebenzi emisha e-Dubai. Kodwa lokho kusho ukuthi akuwona wonke ama-expat azothola umsebenzi e Dubai. Into yokuqala yokukhumbula lokho ukusesha imisebenzi e-intanethi e-Dubai I-2019 kuzothatha isikhathi. Ngenxa yalesi sizathu, udinga ukuthumela i-CV yakho kubathengi bezinhloko bese ubhalisa ukuqhubeka kwakho nabanye abaningi imisebenzi ezindaweni e-UAE. Inkampani yaseDubai City kusukela i-2009 yenza ucwaningo nabaphathi be-HR. Futhi ngaphansi kwalezo zimo, ubufakazi obunamandla kunabo bonke esibutholile ukusiza abafuna umsebenzi ukuze babekwe eDubai.
Kuleso simo, uzodinga ukuchitha ngaphezulu kwezinyanga ze-3 ukuze uthumele i-CV futhi uzifake lapho futhi uthole the ukunakwa kwabaqashi kuzothatha isikhathi kuze kufike ezinyangeni ze-8. Ngasohlangothini oluhle, ungahlala njalo ubambe imisebenzi yesikhungo sokushayela eDubai noma imisebenzi yezitolo eDubai ngesikhathi lapho ufuna a umsebenzi wamaphupho e-UAE.
Ucwaningo lwemisebenzi e Dubai
Empeleni, i-Bachelors noma i-Masters degree iyadingeka kakhulu imisebenzi e-UAE. Ngaphezu kwalokho, iningi le abafuna umsebenzi kudingeka ube nolwazi okungenani lweminyaka engu-2-5 ekusebenzeni kwamakhasimende, noma iminyaka engu-2-3 yeminyaka yokusetshenzelwa kwamakhasimende. Neminyaka engu-1-3 ye isipiliyoni eMiddle East-side. Ngokubaluleke ngokufanayo kuzitifiketi zakho udinga ukuba nesibopho nomuntu onombono. Elinye iphuzu eliyisihluthulelo ku umsebenzi Okwengamela nokubulawa. Ngakolunye uhlangothi, kufanele futhi ubheke izinkampani eziqashisayo. Umsebenzi wokuqasha umsebenzi we-Careerjet e-Dubai futhi Inkampani eqanjiwe ephezulu ye-Gulf expat yokuqasha. Kufanele ngempela ukusebenzisa ne-CV yakho. Ngandlela-thile, uma sihlaziya iphrofayli yenkambiso yomsebenzi we-custom we sicwaninga iphrojekthi ngayinye kusukela ekuqaleni ngokubika. Futhi ukukhomba lokho okudingayo ukuze uphakamise iphrofayela yakho ukuze ulayishe i-CV futhi uthole umsebenzi eMiddle East.
Into yokuqala yokukhumbula imisebenzi ebalulekile
Thatha imithwalo yemfanelo oyidingayo ukuze uthole umsebenzi:
Ngokuvamile, yikhono ukuphatha amaphrojekthi ngokusebenzisa Izinkampani zendawo yase Dubai.
Eqinisweni, kufanele ukwazi ukusebenza ngokuzimela ngaphakathi kwe-UAE.
Isibonelo, udinga ukuqinisekisa umthwalo wakho wemfanelo nokuzibophezela kakhulu ukwenza umsebenzi wenziwe. Njalo ukugcizelela ubunikazi besabelo noma ngabe kunzima. Kakhulu umakhala ekhukhwini ukukhulumisana amakhono esiNgisini nangesi-Arabhu.
Ngokuningiliziwe, kufanele ube matasa futhi uthathe isinyathelo ngaso sonke isikhathi.
Nakanjani, bonisa imisebenzi ebalulekile yemakethe ngamabhizinisi wamakhasimende wamanje. Hlakanipha ngokwanele ukuxazulula izinkinga ngokushesha ekuhambeni kwesikhathi ngokuya ngokuhlala e-Emirates.
Imfanelo / Izidingo ze-career ephezulu e-UAE:
Sengisho nje ulwazi oluhle kakhulu lwezindlela zebhizinisi ezahlukahlukene ze-Dubai.
Njengoba sekuphawulwe iningi lezinkampani ezibukwayo ngokukhangisa nge-intanethi nokukhona kwe-intanethi.
Amakhono okubhala okunamandla ngesiNgisi kufanele futhi akhiphe umbiko oqinile namakhasimende kufanele.
Imisebenzi ye-Emirates iyadingeka isipiliyoni endaweni enamasiko amaningi, ukuqala, iYurophu, i-USA, iCanada, ne-Asia.
Okwamanje futhi kufanele ube namakhono amahle kakhulu wokuhlaziya nesipiliyoni sokuthengisa esiqinile.
Kuze kube manje, njalo hamba e-UAE kufanele kube imininingwane eqondisiwe, isidlali sethimba, futhi ubonise amakhono aphakeme okuthuthukiswa.
Ekugcineni ukuqaphela okuqinile kwazo zonke izingxenye ezisebenzayo nezobuchwepheshe ngaphakathi kokuhlangenwe nakho kwebhizinisi lasendlini.
Ukuqonda ngokuqhubekayo ibhizinisi e-UAE kanye nesipiliyoni esithile sokuphatha se ukuphatha abasebenzi abancane eenkampani zaseMpumalanga Ephakathi.
Amaholo okucwaninga nemininingwane yenkampani e-Dubai ngaphambi kokuxoxisana
Kungakanani umsebenzi owenzayo lapho esebenza ezinkampanini ze-UAE ?. Kumele kukhunjulwe ukuthi ngaphezulu kwezinkampani ze-170 ku-UAE zikhona kubonakala ku-glassdoor.com. Enye iphuzu eliyinhloko ocwaningweni lwakho kufanele kube Imisebenzi yomsebenzi wase-Dubai. Ngakolunye uhlangothi, ungabheka lokho ngaphambi kokuba uhambe nongxoxo. Isibonelo, khetha isitifiketi somsebenzi futhi uqaphele ukuthi yiyiphi imali engenayo njengelungu lomsebenzi noma ummeleli ophezulu wezokuphatha angathola lokho indawo ethile yomsebenzi e-Dubai.
Kuze kube manje, inkampani kaGlassdoor eDubai bafeze izibalo zamaholo. Ngokuvamile, isibuyekezo sabo sisuselwa ku-980 Dubai City Companies. Ngokwengxenye enkulu, inkampani idale imibiko yamaholo ku-UAE. Njengoba kukhonjisiwe ngenhla, ngamafuphi, imibiko yamabhonasi ekhokhwa yinkampani ngayinye. Futhi ku- Ukuhlaziywa kokugcina amaholo anemininingwane afakiwe. Ngisho bahlukanisa imibiko ihora lonke ekhokhela abasebenzi nezinkampani zaseDubai. Kunoma yikuphi, ukubuyekezwa kungahanjiswa ngokungaziwa noma ngabasebenzi. Noma ukuthi ngubani osebenzela leyo nkampani ethile eDubai. Ngakho-ke lapho a i-recruiter e-Dubai uzokubuza phakathi nesikhalazo sakho ukuthi ufuna ukuthola okuningi kangakanani ?. Ngokushesha ucwaningo lwakho ku-Glassdoor, uzokwazi inombolo ongayilinganisa futhi ubanikeze ngaphandle kwesicelo seholo esihleliwe esingalungile.
I-Glassdoor - hlola ukuthi imali engakanani ongayilindela e-Dubai
Ngesikhathi esifanayo imisebenzi ephesheya e-Dubai Ama-2019 akhona futhi akulinda. Kepha isibonelo, imisebenzi yezimoto eDubai noma imisebenzi yamazinyo eDubai ikulindile. Akunandaba yisiphi isikhundla osisebenzisayo kufanele ube ngu-100% okulungiswe ngomzuzwana wokuhlangana ubuso nobuso. Konke kungazelelwe udinga ukubheka ngokujulile Imisebenzi yase Dubai. Umbono ojulile wenkampani yocwaningo, imigomo kanye nokuhlanganisa amathuba okuqashwa ukuthi inkampani ihlinzeka. Ngakolunye uhlangothi, ucwaningo lwezinhloso zomsebenzi olwaziwayo kakhulu izikhala zomsebenzi we-IT eDubai. Ngoba i-7 Emirates amathuba emisebenzi ahlala njalo I-Dubai iminyango evulekile yezindleko ezintsha ezivela eNdiya.
Ekuhlaziyweni kokugcina kwamathuba emisebenzi e Dubai, kufanele uthathe ukunakwa kwabaqashi. Lungisa iphrofayli yakho ngokucatshangelwa okuncane uma nje gulf sites umsebenzi ukutholakala kwemisebenzi yamanje e Dubai. Noma kunjalo, kunoma yikuphi icala, hlola kabili Imisebenzi yomsebenzi wase-Dubai kanye nezinye izibukeli abafuna umsebenzi ukubuyekeza. Ngakho-ke ngenxa yalokho yenza isinqumo sokuthi iyiphi inkampani ngaphansi kwalezo zimo obukeka ufuna ukusondela kuyo. Futhi ekuhlaziyeni kokugcina, beshaye ukukhombisa amakhono webhizinisi njengobuhlakani. Ngokukhethekile futhi ngokuqinisekile ulwazi lomkhakha luhambisana nobungcweti ngokuhlukaniswa kwenkampani yabo. Kanye nokuzethemba okukhulu lapho kufanele bakubandakanye khona ngokuzayo.
Amasu emisebenzi e Dubai
Izingosi zokuxhumana ukuthola umsebenzi eDubai 2019 nase-United Arab Emirates
Into yokuqala okufanele uyikhumbule ukuthi ngaphezu kwengxenye izikhundla zomsebenzi azikhangiswa kuwebhusayithi yokuqasha abantu eDubai. Ngasikhathi sinye, lokhu kuvame ukunikezwa njengesibonelo semakethe yemisebenzi efihliwe. Yize lokhu kungaba yiqiniso ukuthola lezi imisebenzi inikeza ngamakhasi aphezulu we-Linkedin e-UAE. Ngendlela efanayo abafuna umsebenzi kanye nenkampani yethu banenyawo emnyango. Isevisi yethu yokuxhumana ihluke kwezinye izingosi zomsebenzi e-Dubai.
Ngaphezu kwalokho, empeleni, iDubai City Company yadalwa uhlelo lapho ungahamba ibanga elide bese uxhuma nabaphathi be-HR ukuze uthole amathuba emisebenzi e-Dubai City. Ngenhloso yokukusiza. Noma kungekho owaziyo emikhondweni uzoba khona ukuxhumana nabaphathi be-HR, ama-Senior Recruiters, kanye nama-CEO eDubai. Ukubeka ngenye indlela, iningi leDubai lakhiwe izikhungo zokuqasha ube nobungcweti bokuvulwa kwemisebenzi endaweni yangakini yobungcweti. Isibonelo, ungaxhumana noMqondisi weH HR weHays.ae futhi kunethuba elikhulu lokuthi uzokwazi umuntu owaziyo ikusize ekusesheni komsebenzi wakho.
Ukuthengwa kwamazwe ngamazwe kungafaka isicelo somsebenzi e-Dubai
Ukuze gulf imisebenzi, ukuxhumana kwenethiwekhi kungenziwa ngokubambisana ne-Linkedin. Vele, ungaba mathupha nakweminye imithombo eku-inthanethi. Kepha ngenxa yalesi sizathu, ungajoyina eyethu izinhlangano ezinkampani eziqeqeshiwe uhlelo futhi ungaxhumana nabasebenzi abangaphezulu kwe-2,000 eDubai City. Njengomzekeliso ngenhla inhloso yethu ukukuxhuma nabasebenzi abaphezulu bokuqashwa. Sengisho nje e-United Arab Emirates sinenkosi yethu, Ngemuva kwalokho sisebenza neQatar futhi I-Saudi Arabia lapho ungathola khona imisebenzi yokuqasha eDubai 2019 ngaphakathi kwensimu yakho.
Ekugcineni, amathuluzi amaningi e-intanethi akhona ukukusiza uthole umsebenzi ophezulu e-Dubai 2019 e-UAE. Sengiphetha, ingosi yezokuxhumana nabantu efana ne-LinkedIn isiza ama-expats aphesheya ukuthi afake imisebenzi eDubai. Ngezikhathi ezithile abaqashi abavela ku-Linkedin kukuvumela ukuthi uxhumane nabo kepha kuphela ngendlela ephumelelayo njenge-Emirates Airlines.
Ngokwengxenye enkulu, zama ukuxhumana nabaqashi bese ubeka isikhala somsebenzi. Kunoma ikuphi, bhalisa uhlelo lwethu nokuxhunyaniswa kwe-master ukuze ufinyelele Imisebenzi eDaily for foreigners kanye nokuvuleka kwemisebenzi eMpumalanga Ephakathi. Ukufingqa ungabuye uhlangabezane nomunye ochwepheshe futhi isisebenzi sokuqasha ngokusebenzisa ezinye izingosi zethu zokuxhumana zokuxhumana ezifana ne-Dubai City Company Facebook or Twitter.
Xhuma nabaqondisi / abaqashi / abaphathi be-HR
Whatsapp Group ukuthola umsebenzi e-Dubai
Iphoyinti elivame ukunganakwa yizingosi zomsebenzi wengosi. Ukukhombisa uhlangothi oluhle ngalezi zinkampani ongazithola. Ukwamukela izihambi e Dubai, ngokuphelele i-Dubai imisebenzi kahulumeni izikhala futhi zikhuluma ngokujwayelekile Imisebenzi yengxenye e-Dubai uma usuvele usekelwe e-UAE. Noma kunjalo ngecala elibi uma uvela e-India futhi ufuna imisebenzi eDubai ye Indian Kunzima. Futhi yize usanda kuthweswa iziqu noma ungenawo isipiliyoni sokusebenza futhi ufuna imisebenzi eDubai yamafreshers. Ngokuvamile ukukhuluma ngokuhamba kwesikhathi umsebenzi wakho wokufuna umsebenzi eDubai uzowa. Ngakho-ke njengoba kukhonjisiwe ngenhla Dubai City Company efanele ukusungula imisebenzi eminingana nge-MBA. Iqembu lethu lithathe zonke izinto ezibhekwayo nasekuhlaziyeni kokugcina ukuthi ziqale ukusiza ukuthumela kwamazwe ngamazwe.
Ngaphezu kwalokho, izindawo ezithandwayo kakhulu zomsebenzi kukhona imisebenzi yasebhange e-Dubai njenge-Emirates NBD ne-HSBC Bank e-UAE. Ukungasho ukuthi imisebenzi yabameli ihlangene nemisebenzi yezomthetho eDubai. Futhi inkampani ye-Rak Logistics lapho kufanele khona okuphezulu izinkampani ezizinze eDubai ezinikezela ngemisebenzi yokuhlinzekela izinto eDubai. Ngokunikezwe lawa maphuzu abafuna umsebenzi wethu wamazwe omhlaba kanye ne-UAE expats base bethumela i-CV / baphinde baqale kuyo abasebenzi bokuqasha e-UAE.
Joyina i-WhatsApp Group yeMisebenzi e-UAE
WhatsApp Umlayezo ngaphandle kokulibazisa angakwazi sikusize ukuthi uthole Umsebenzi wase Dubai. Ngomzuzwana ungakhuluma nama-ejenti wokuqasha. Noma ngithumele i-CV yakho phakathi kwabambalwa abaqashi base Dubai Amaqembu we-WhatsApp. Ngezikhathi ezithile abaphathi bakwa-HR nabaqasha abazoqasha eDubai nase-Abu Dhabi ukuthumela imisebenzi yokufaka idatha eDubai ukuze ukwazi ukungena emisebenzini. Kuze kube manje, sinamalungu e-10 e-whatsapp mobile e-Dubai. Ngakho-ke ake siqonde ngqo esikhathini samanje ngaphezulu kwe-50,000 abafuna umsebenzi vele bathole imisebenzi yamazwe omhlaba eDubai 2019 kuphela ngokusebenzisa ezethu Emaphakathi Mpumalanga Iqembu le-WhatsApp.
Dubai City Company ngethemba lokuthi uzothola ne umsebenzi wamaphupho e-United Arab Emirates. Ukumema ukuthi ujoyine i-Dubai yethu Iqembu le-WhatsApp. Ngakolunye uhlangothi, i-100% imahhala futhi awudingi ukwenza okuningi kuphela layisha kabusha futhi thola imisebenzi engcono kakhulu ye-expat e-Dubai. Ukufika ekugcineni kokuchofoza okukodwa kungashintsha okuningi futhi ukuqashwa kwakho kweDubai kusendleleni.
Xhuma namaHiring Wokuqasha Abasebenzi ku-WhatsApp Group
Ikusasa lokusesha umsebenzi kuwukuqala kwevidiyo
Izisebenzi zeJobe e-Dubai, ekuphetheni, ngifuna ukhetho oluhle kakhulu. Ukuqala, amabhizinisi asemazweni aphesheya abika ekhombisa ukuthi kusukela nge-2015. Kuze kube sikhathi samanje, i-75% yokubukwa kwe-inthanethi yayisesakhiweni sevidiyo. Okomzuzwana i-CV yevidiyo izokwenyuka ibe ngu-85% yi-2020 Expo eDubai Emisebenzini Kahulumeni. Ukuphathwa kokucabanga kwangaphambili kwinhlangano kungumkhuba wokuphinda uqhubeke i-United Arab Emirates.
Cindezela i-Youtube Resume iDemo ukuthi ingabelana ngempumelelo kuwo wonke amavidyo ahlalisanayo. Okokuqala, ukusesha umsebenzi wevidiyo indalo yevidiyo eqala kabusha i-youtube ivame ukuthatha i-30 ibe amasekhondi angu-90 ubude. Elinye iphuzu elisemqoka okudingeka ulilandele liboniswa njengomuntu wethonya Okwe umqashi oqondile. Udinga futhi ukwazi ukukhombisa indlela ongasiza ngayo inkampani efanele ngemibono yabo. Ukwengeza, babasize bafeze ibhizinisi bakhule futhi ngamanye amagama impumelelo ensimini yebhizinisi.
Ukuqala kwevidiyo yokufuna umsebenzi ku-UAE
Ukungasho ukuthi iningi labantu abafuna umsebenzi alazi ukuthi luqale kuphi. Uma nifuna Imisebenzi yase Dubai kwabaseMelika kufanele uhlole uJobema.com. Okubaluleke kakhulu kulokho ukuqala ukuthola abaphathi abakhulu abafanele futhi ukuqasha abaphathi e-UAE. Yize lokhu kungaba yiqiniso ukubuza abaphathi bakwa-HR ngaphakathi enkampanini kanye nabeluleki bokuqasha bangaphandle kwi-generall kuzokusiza ukuthi ubekwe. Uma kunjalo, landela i isiko lenkampani futhi unikeze nge-movie yesingeniso kumqashi wakho wesikhathi esizayo.
Umsebenzi ngezikhathi ezithile emazweni ase-gulf akwenzeka okukhulu kakhulu. Ikakhulukazi lapho abacebisi abaqashi bevakashela i-Youtube futhi. Ngaphezu kwalokho ukuqasha abaphathi ukubiza abazobhapathizwa futhi uxoxe ngezikhundla ezikhona. Ngokufanayo bhala inkulumo yokuhamba-in kanye nabo nangemva kwesikhashana, ilungu labasebenzi lamanje linikeza Umsebenzi wase-Dubai isikhala. Dubai ivulekile ubufakazi bokwazisa kakhulu ngokuhlangenwe nakho kwabo kokuqashwa nabaqashi.
Ividiyo isacishe yaba inketho entsha ye ukuzingela umsebenzi eDubai City. Kepha ngokuhamba kwesikhathi, zingadluliswa njengezindlela ezihlukile zokufuna umsebenzi nazo. Esikhundleni sokwakha amafomu amade we-biography, izincazelo zisebenzisa iziqeshana ze-movie ze-YouTube. Ngokufingqa, nikeza umbono ongokoqobo wezibopho zomsebenzi oye wakuphatha esikhathini esedlule. Njengoba kukhonjiswe ngenhla abasezingeni eliphakeme nabafakizicelo abanolwazi kusuka kwasendaweni Imakethe yomsebenzi wase Dubai zithandwa kakhulu kunhlangano yomhlaba wonke e-United Arab Emirates.
Njengoba unikezwe la maphuzu, okwenza ividiyo elula ye-YouTube iqale kabusha. Nakanjani zizobasiza thatha isinqumo esifanele futhi uphokophele isikhundla eMnyangweni Webhange. Abanye abaqashi sebevele bemukela ukuthandwa kwamafilimu wokuqalisa kabusha. Ekuhlaziyeni kokugcina, izinhlelo zokusebenza ezingxoxo ezihleliwe futhi ezinikezela ngemibuzo nezimpendulo Showdown for a indlela yokungena ezixoxweni ezisemthethweni. Ukufingqa ukusebenzisana ubuso nobuso, ngokuhamba kwesikhathi, kwandisa ukubandakanyeka kwabafaki sicelo nomphakathi.
Ukudluliselwa kwemisebenzi engcono e-Dubai
Ngenxa yalesi sizathu, ngokuqinisekile abaningi abafuna umsebenzi bazame amasayithi emisebenzi ahamba phambili eDubai nakwezinye izindawo zokusebenzela zakwa-intanethi. Ngaphezu kwalokho, ukuyibeka ngendlela ehlukile, amaphephandaba ayitholanga impendulo nhlobo. Ekukhanyeni umshayeli wezokuhamba e Dubai. Noma kunjalo, ukuhanjiswa ngokuqondile kungakuthola indawo e-Dubai. Kodwa empeleni, iningi lemisebenzi elinikezwayo livela kubantu obaziyo ngokungaqondile. Ngakolunye uhlangothi, le nqubo yokuhlelwa ingakuthola isikhuthazo sememo. Ngokusizwa kokudlulisela ukufaka isicelo Inkampani yase Dubai imisebenzi isikhundla kukunika onqenqemeni oluqinile kanye nokuzethemba. Unalokhu engqondweni, ungathola noma yisiphi isikhala eDubai ngaphandle kwe-de facto ukufuna umsebenzi oyingqayizivele womsebenzi e-UAE.
Unikezwe la maphuzu, iningi le abafuna imisebenzi bafuna ukuba nemisebenzi ku-UAE. Empeleni, wonke ama-expat angathanda ukusebenza nezinkampani ezinhle. Lapho bangasebenzisa khona imfundo yabo futhi empeleni basebenzise ikhono lamakhono nethuba kanye namakhono okuxhumana. Okubalulekile ukuqaphela ukuhanjiswa kusengumthombo omuhle kakhulu abafuna umsebenzi e Dubai. Ngaphansi kwalezo zimo ukusebenzisa izikhalazo ngemisebenzi engcono eDubai kusadingeka ube nesipiliyoni esihle. Eqinisweni, ungaba yilungu elinentshisekelo kakhulu. Kepha ukuze uqale umsebenzi udinga ukuba nendawo ezokusekela noma umndeni noma abangane abanezikhundla ezinhle ababenesikhundla esiyinselelo.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi iningi labaqashi likhuthaza abasebenzi babo. Ngokuvamile, uma bebhekisela enkampanini yabo ngokulandela impumelelo. Ngokushesha uma bezokuqasha wena isimo sokunqoba umqashi nomsebenzi womsebenzi. Ngokuhamba kwesikhathi, wena uthole ukubekwa komsebenzi e-Dubai ngaphakathi kwezithuthi emakethe e-Emirates. Futhi uxhumano lwakho luthola umvuzo womtholi wokusebenzisa umthelela noma ngisho nesisebenzi esiphezulu.
UJob e-Dubai 2019 Boards kanye ne-Career Websites
Amabhodi kaJobe aphikelela ngokwesiko sesha imisebenzi yendawo e-Dubai. Amawebhusayithi e-Career kuze kube yimanje imisebenzi yokukhangisa e Dubai. Ngokusobala okwamanje ukuthumela amathuba omsebenzi omusha nokuqhuba ibhizinisi zokuthutha amathuba okuqashwa kwamanye amazwe. Ngesikhathi esifanayo, ezinye ze amabhodi emisebenzi kungenzeka ukuthi ikhona ngendlela ejwayelekile yokucabanga. Kodwa okwamanje, i-98% ye amawebhusayithi okusebenzela kanye namabhodi emisebenzi thola izandla-on virtual media format. Phakathi amabhodi emisebenzi namawebhusayithi emisebenzi e-UAE evula imisebenzi ye-Expo 2020, I-Dubai ihlukaniswe imali abayitshalile. Ngasemuva akukho dolobha elilodwa kuphela e-Emirates, zama ukusesha imisebenzi kanye umhlahlandlela eDubai.
Ngenxa yalokho, izinkampani zikahulumeni ezihambisana njalo zinikeza amabhodi emisebenzi kanye izinketho zomsebenzi ku-UAE. Empeleni, ukuqashelwa abaqashi bangathola imisebenzi yokuhlinzeka kusuka lapho. Ngakolunye uhlangothi, ungafaka ngokunenzuzo amathuba okusesha imisebenzi. Ngesikhathi esifanayo kwi-intanethi, ungathola noma iyiphi indawo e-Dubai. Ngaphezu kwakho konke amanethiwekhi okuxhumeka ku-inthanethi, sinezibalo eziningi zezinkampani ezihlobene nomsebenzi wewebhu emhlabeni jikelele wokuthumela imisebenzi. Ngokwesibonelo, I-Dubai Airport ithumela umsebenzi wezindiza e-Dubai noma i-Fiverr.com lapho ungathola khona imisebenzi yama-graphic designer e-Dubai.
I-Dubai Best Job Portals e-UAE - njalo uthole okuningi
Ama-Job Boards amahle kakhulu eMpumalanga Ephakathi
Thola umsebenzi e-United Arab Emirates neDaily City Company. Yize lokhu kungase kube yiqiniso senzeke phakathi kwama-ejenti amahle kakhulu wokuqasha inthanethi. Ngenxa yalesi sizathu, sinikeza usizo nge best izinkampani Emirates ezifana ne-Monster.com, eqinisweni, i-Bayt.com noma i-CareerBuilder.com esebenza nathi. Enye iphuzu eliyinhloko namakhasimende ethu amawebhusayithi asebenza kakhulu kakhulu kithi. Eqinisweni nabo basebenzisa izidingo uthole umsebenzi ku-UAE. Ukucacisa izinsizakalo zethu zokusesha umsebenzi esizihlinzekayo e-UAE ungenye yezinsizakalo ezingcono kakhulu e-Dubai. Ngokushesha uzothola ukuthi ukusebenzisa indlela endala yokusesha kwezenzo zendabuko kuzokwehlukana.
Noma kunjalo, uma nje usebenzisa izinsizakalo zethu zokuthola imisebenzi ungase futhi uthole imisebenzi e-Saudi Arabia. Kodwa ngakolunye uhlangothi imisebenzi eQatar Kulula ukuthola. Eqinisweni ama-ejensi okuqasha kanye namabhodi emisebenzi eQatar anesikhathi esiguqukayo esithe xaxa sokufaka ukhetho eMiddle East. Ngokuvamile ukukhuluma ukufuna imisebenzi eMiddle East kune-UAE kuphela. Kuze kube manje ngifuna imisebenzi kulo lonke i-Middle East e-2019 kanye ne-202I-0. Ngikunika ukuthi useshe izithameli ezikhulu kakhulu zamabhodi okuqasha futhi abaqashi abaqondile ngaphezu kwebanga elikhulu.
Thola ukuthi ubani ozoqasha imisebenzi e-Dubai
I-International Job Fairs e-Dubai
Imisebenzi yamazwe ngamazwe okuqashwa kwamabhizinisi ngokuvamile ihlongoza izimboni ezithile. Kodwa ungakhulumi I-Dubai international works fairs ahluke ngokuphelele kusuka emakethe yomsebenzi wasekhaya wase Dubai. Enye yezindawo ezinhle kakhulu yi-Careers UAE lapho ochwepheshe bamazwe ngamazwe abazingela isiqondiso esisha somsebenzi. Lezi zinsuku zokuqashwa zihlale zihambisana nabanye abaqashi noma Izisebenzi zokuqashelwa emhlabeni wonke.
Lokhu kuqokwa komsebenzi kubeka ukusiza abantu abavela e-UAE. Ukuqala imisebenzi emisha eLondon, ngaphezu kwalokho funa imisebenzi e-Australia, ungasasho enye yezindawo ezithandayo zezintandokazi zezintombikazi Imisebenzi eNew Zealand. Futhi ngezikhathi ezithile ukuchaza kuzokwazi ukuthola imisebenzi eCanada. Ngakho ngezikhathi ezithile abaphathi abanokuhlangenwe nakho abanokuzifunela Imisebenzi yase-Dubai international. Ngokusobala hhayi amaholo kepha ngolwazi lomhlaba jikelele. Ngalesi sizathu, uHulumeni wenza isimemezelo esikhethekile sezentengiso.
Kunoma yikuphi umsebenzi, ama-fairs azohlala ehambela ohlwini lwabaphathi kanye nezikhungo ezizobe zikhona emibonweni yamazwe ngamazwe e-Dubai. Unikezwe la maphuzu, ucinga amathuba okuthengisa amathuba e-Dubai kufanele uhlole inkampani ngayinye eyakuthanda ngisho nemisebenzi e-Sharjah. Njengoba sekuphawulwe kufanele ulethe inani eliphelele le-curriculum vitae kanye nolwazi lomsebenzi. Indaba yokuphila futhi njengomphumela ukulungele ukuzithengisa inkampani yase Dubai. Amathiphu ethu ngawe Imisebenzi ye-IT e-Dubai ngomfokazis - ngoba lolu hlobo lomsebenzi wokuqala umsebenzi lulula ukuthola.
Imisebenzi yaseJobe e-Dubai ingaba yimpumelelo emsebenzini wakho
Uma uya lapho zama ukuba zonke izinto zibhekelwe ukuthola umsebenzi e-UAE. Uma nje uqala izingxoxo nabaqashi kufanele ucabangele lokho njengenqubo yenhlolokhono. Noma ngabe yikuphi ukukhuluma okulula mhlawumbe kuyingxenye yengxoxo ye-mini. Ngayinye i-ejenti yokuqasha eNingizimu Afrika umsebenzi e-Dubai usondela ngalolo suku kungakubeka njengempumelelo ekusebenzeni kwakho. Futhi ngesikhathi esifanele abanye abafakizicelo bangenalo ithuba lokukushaya ikakhulukazi imisebenzi e Dubai Dubai ne-Abu Dhabi.
Enye iphuzu eliyinhloko ukuthi ibhizinisi elithile lamazwe angaphandle. Ngokumangalisa kungenzeka zama umkhankaso wokwenza umsebenzi kuwe. Noma kulokhu, ukuqhutshwa kwimibuzo engosini nawe njengokhetho oluhambisana nalokho okushiwo. Eqinisweni, siyazi abazingeli bamathuba emisebenzi abathola imisebenzi e-Oman kanye nakweminye Imisebenzi eSingapore nge-2016 international umsebenzi wezebhizinisi e-Dubai.
Bhalisela i-Careers UAE Job Fairs e-Dubai
Izinkampani zase-Dubayi amawebhusayithi wemisebenzi e-Dubai
Together neDaily City Company, ungaba nesithombe sakho somqondo kumqashi omuhle kakhulu eDubai. Ilawulwa ngu inkampani engcono kakhulu e Dubai ukuze uthole umsebenzi njengoFilippino futhi ngokufanayo nakwezinye izinkampani. Inkampani yethu yakha uhlu lwezinkampani eziqasha e-United Arab Emirates. Ukukhombisa ukuthi kungani ungayi ngqo ephuzwini. Bese isicelo esisodwa sokuthola ithuba lomsebenzi e-Dubai ingxenye yomsebenzi wabaqashi kusuka kwiwebhusayithi yabo ?. Ngenxa yalesi sizathu, uma izinhloko zakho zivulela ukuvuleka esigabeni sabo sokuqashwa. Kunenketho engalindelekile oyoyiyo thola umsebenzi e-Dubai. Ngomfanekiso ofanayo, kunethuba elikhulu oye lalinda ngalo. Ubani owazi ukuthi ungathola imisebenzi yaseSaudi futhi empeleni idluliselwe ukwakhiwa imisebenzi e-Dubai 2019.
Ukufingqa yonke yethu inkampani e Dubai ngokuya kwabathumayo. Udale uhlu lwabaqashi ngqo e-UAE. Ukuze uthande ukuqala umsebenzi nabo. Futhi ukusebenzisa isipiliyoni sakho somsebenzi ukumboza isikhundla esisha ku-UAE. Kunezinkampani ezimbalwa zemisebenzi yazo emazweni aseGulf, imisebenzi yobunjiniyela bomphakathi eDubai 2019, ngokuphelele uzothola okuthile okuwusizo kuwe.
Dubai Izinkampani indlela enhle yokuthola umsebenzi
Uma unesiqinisekiso sokuthi ungasethwa ekusebenzeni inkampani ethize noma isibonelo ngokulula ukufundisa imisebenzi e-UAE. Ngemuva kwalokho ngaphandle kokulibala thatha ikusasa elizayo futhi uthole ithuba lomsebenzi olinganayo elihlangabezana nesikhathi sakho somsebenzi sokuphila. Kepha ngasikhathi sinye, awunaso isikhathi sokunethezeka futhi udinga ukwazi indlela yokuthola umsebenzi e-Dubai kuma-visa okuvakasha ashesha ngokwanele ukukhokha izikweletu. Ngomzuzwana kufanele ufake isicelo sazo zonke izinkampani ezisohlwini lwethu. Ngokuphazima kweso kodwa lokhu kungaba yikufaneleka kokungakwazi ukusebenza ngokuba indlela enhle ku ukuthola umsebenzi. Uma isikhathi esifanele sifika ukuthola indawo yakho entsha ngaphakathi izinkampani eziphakanyisiwe e-Dubai.
Thumela isicelo - Izinkampani Eziphezulu Zokusebenza e-Dubai
Cold Ukubiza imisebenzi eMpumalanga Ephakathi
Ekugcineni, sifinyelele ukubiza okubandayo ngokucabangela umsebenzi wokuthumela i-Dubai. Ngakho ngezikhathi ezithile, sicabanga ukuthi ubonakala unentshisekelo ekubalweni komsebenzi. Nokho, leli thuba liphuma emingceleni. Kodwa ngesikhathi esifanayo, lesi sipho semisebenzi sithunyelwa kusuka kwenkampani kweso e Dubai. Ngaphezu kwalokho, umxhwele ngokumangalisayo ngesikhokhelo somholo. Futhi ungathanda ukwandisa le super izeluleko ezithakazelisayo zezemfundo. Eqinisweni, udinga ukuqala ukungafani nemisebenzi ejwayelekile yase-Dubai emisebenzi ye-online. Ngokulinganayo, zama ukuthatha ngaphansi kwelulekwa ucingo olubandayo. Ngakolunye uhlangothi, ungase uqaphele le nhlangano njengenethiwekhi yokuxhumana kanye nemisebenzi eMpumalanga Ephakathi.
Ngenhloso yokugcina lesi sikhulu Umsebenzi ku-Dubai on WhatsApp ku-2019 -2020. Ngokuvamile, kufanele uqale ukwenza amakhono okuthengisa ngocingo ukuze uqiniseke ukuthi uyasebenza. Kodwa isibonelo, uma uhlola imisebenzi ye-undergraduate ku-UAE. Awudingi i-imeyili enkulu kuphela ukuze uxhumane nabaphathi ngabanye ngaphakathi kwenhlangano lapho wena thumela i-CV yakho. Kepha ngakolunye uhlangothi ukuthola imininingwane efanele yokuxhumana enkampanini ephezulu umphathi kwesinye isikhathi iba yindaba. Ngakho-ke umbe google Iwebhusayithi: isikhundla seDubai somsebenzi noma ngokuzama ukuzama ukukhuluma nenkulumo okungenani yokwamukela abantu ithonya lomuntu.
Imisebenzi e Dubai 2019 - Kungani usebenzisa i-ejensi yokuqasha?
Kubaluleke kakhulu ukuqaphela ukuthi ithonya lokuxhumana phakathi kwabantu kubalulekile uxhumane nabantu ngokuqondile. Kumele kukhunjulwe ukuthi abaphathi abaqashiwe ngaphambili bangaba nezikhala ezinhle ezizayo. Njengoba unikezwe la maphuzu, yiba nokuzethemba bese unamathisela njalo a ikhophi ye-curriculum vitae yakho kanye nama-autobiography. Abanye babaqashi badinga ukuthi bavumele imilayezo oyithumelayo.
Ungase futhi ucele ulwazi mayelana nezinhlobo ze ukuhambisa umsebenzi e Dubai 2019, noma yiziphi izinhlobo zamakhono noma izimfanelo inhlangano ebheka kumuntu okhethiwe. Khumbula ukuthi lolu hlobo lokuthintana lungase lungatholakali ngaso sonke isikhathi, kodwa ngaso sonke isikhathi kukhona ithuba lokukunikeza ithrekhi yangaphakathi kwizithuba ezizayo.
Abakwa-Head-Hunters nama-Recruitment Agencies e-Dubai
Okokuqala, kufanele ucabangele ezinye usizo lochwepheshe ekufuneni kwakho umsebenzi. Ngale njongo, abazingeli bekhanda nezinkampani zokuqasha bangakwazi ukukunikeza isandla. Iphuzu livame ukunganakwa izeluleko zokuqashwa kwemisebenzi eMpumalanga Ephakathi. Ukubeka ngenye indlela ezinye zezinhlaka zangasese zokuqasha zingase zifike ngemali yokukhokha imali. Kodwa kulabo abathandayo abaqashi bahlale bedala iphrofayili futhi balinganise inani lalowo nalowo umsebenzi wokufuna umsebenzi e-Dubai. Ngalesi sizathu, kukhona abaphathi abaningi bezinhlangano nezinhlangano ezizimele lapho ungathola khona layisha ukuqhubeka kwakho.
Ukuze wenze lokho udinga ukucacisa okuhlangenwe nakho kwakho kwezemisebenzi kanye nokwaziswa okwamanje kumqashi wokuqashwa. Ngaphansi kwalezo zimo okufanele ziqashwe ngokusebenzisa ama-ejenti wokuqasha kufanele zilungiselelwe inqubo ende kakhulu. Sengisho nje I-ejensi yokuqasha eDaibhi isiza abantu basezizweni ukuba baqashwe. Ekuqaleni, ukusungula umbiko wephrofayela bese uxoxa nabaqokelwe. Futhi ekugcineni, ukubeka abaqashiwe. Kuzothatha isikhathi ngesizathu esizobasiza ukuba bahlehlise ibhizinisi ngenkampani yokuqasha. Abazingeli bekhanda e-UAE thola umuntu ofuna umsebenzi ngokuzama ukuthola uhlamvu oluhlukile.
Imisebenzi yokusiza emisebenzini yomsebenzi wase Dubai
Unikezwe la maphuzu i-ejenti yokuqasha e-Dubai nase-Abu Dhabi ezama ukugcwalisa isikhala esinikezwe umphathi wakwa-HR ngaphakathi kwenkampani ethile. Kodwa-ke ukuthola isikhundla somuntu ofuna umsebenzi akuyona into elula ukwenza. Noma umuntu eqashe umuntu oqoqa izinsiza zakhe. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi iholo livame ukukhokhelwa kwikhomishini. Ngakho ukukhombisa umzingeli wekhanda ukuzibophezela ukubeka wena ASAP.
Ngasohlangothini oluhle khumbula ukuthi inqwaba yesikole, izikhungo, kanye namayunivesithi e-UAE. Eqinisweni, eziningi zazo zinazo imisebenzi yokusiza kanye nomsebenzi. Futhi kokunye, basiza kakhulu abathweswe iziqu abasha ekusunguleni izinqubo zabo kwinguqulo eyamukelekayo. Ngasohlangothini olubi ukuqashelwa, ochwepheshe basize omunye wabafundi nabafundi be-postgraduate ngokusesha imisebenzi yabo e-United Arab Emirates. Ngakho thola lelo phupho ukuqashwa ku-Dubai Companies 2019.
Bhalisa ngama-ejenti aphezulu wokuqashwa e-UAE
Ukuqashwa kwesikhashana noma ukuqeqeshwa
Ngezinye izikhathi amathuba emisebenzi yesikhashana ingaba isiqondiso esihle sokuba nezikhundla ezihlala njalo. Ngaphezu kwalokho, uma ushiywe ngaphandle kwemboni ukuthola umsebenzi wesikhashana nanoma iyiphi inkampani ehloniphekile yiyona indlela enhle yokuthola ukuqala komsebenzi wePakistan. Dubai City Inkampani ikuhlinzeka ngoxhumana nabo ngebhizinisi elifanele ukubiza umphumela ngokuzayo. Ama-ejensi wokubhalisa angenakubalwa angasiza ekutholeni izindawo zesikhashana noma ezijwayelekile umsebenzi wezinkontileka e-United Arab Emirates.
I-Internship iyacatshangelwa ukuzikhethela kwabafundi abathola iziqu e-UAE. Empeleni, lowo okukhulunywa ngaye nje ukuthola iziqu kumfundi wasekolishi kufanelekile ukuthatha ama-internship ?. Empeleni, kufanelekile ukwandisa noma yikuphi okuhlangenwe nakho okusha eMiddle East kunoma yisiphi isikhundla. Futhi izikole ezivame ukwenziwa nezinsizakalo zokubekwa kwemisebenzi yangasese njengezesikhashana umsebenzi nokuhlala eDaily izinkampani zingaxhuma i-undergraduate ngamathuba.
Ngakolunye uhlangothi, kufanele uthathe igxathu phambili futhi lokho kuzoba yindlela enhle yokuthola umsebenzi eDubai City. Ngasikhathi sinye, ungaqala ukusebenza nganoma yisiphi isikhathi nje ukuthola ukuxhumeka kwezimboni ezibizayo. Ngakolunye uhlangothi ukuthola izeluleko eziningi, kufanele uhlole ukuzama find iphupho lakho umsebenzi e Dubai 2019.
Imisebenzi e-Dubai 2019 futhi izama ngendlela ehlukile
Ukuyibeka ngokuhlukile emakethe yemisebenzi yamanje yindawo yokuncintisana yanoma yimuphi umceli womsebenzi. Abanye abafuna umsebenzi baye bathuthela inzuzo yezindlela eziningi zokudala zokubheka abaqashi eDaily for Indian. Enye iphuzu eliyinhloko yi-adversa kanye namabhodi okuqasha. Ngenxa yalokho izinhlamvu zokuqhubeka nekhophi ye-curriculum vitae yakho kanye ne-biography kufanele ifakwe.
Qalisa ukusabalalisa, ngaphansi kwalezo zimo, iba ebaluleke kakhulu. Ngalesi sizathu, abanye abantu ngisho naseLondon bakha izinhlobo ezimbalwa zokuqalwa kabusha kwabo. Ukuzethula emphakathini ojwayelekile nokumasha uzungeze idolobha laseLondon njengebhodi lomgwaqo elenziwa ngabantu. Njengoba kukhonjisiwe ngenhla, imishini ethile yabantu abathile eye yadlula ukuze iphawulwe Abaqashi abangase babe khona e-Dubai.
Ngaphezu kwalokho, ngokufanayo lezi zindlela zingasebenza kukusize ukuthi uqale ukusebenza nomndeni wakho e-United Arab Emirates. Ngendlela efanayo, qaphela lapho ufuna umsebenzi wamazwe omhlaba. Ungahle uthathe ukucatshangelwa kwabaqashi ngisho kuhlanganiswe nakho imisebenzi yebhange e-Qatar noma e-Saudi Arabia. Kodwa ngakolunye uhlangothi, ungase unikele ngolwazi olungalungile.
Noma ngabe abazingela umsebenzi isebenza ukusebenzisa amasu wokudala nganoma iyiphi indlela etholakalayo. Futhi ngophawu olufanayo, uzozama ukugqama esixukwini sabafuna umsebenzi weDubai nabanye abafaka izicelo. Ucabanga ngalokhu, qiniseka ukugcina imininingwane efanelekile embonini. Ngoba ungahlala ngethemba lokuthi uzothola okujabulisayo Amathuba omsebenzi omusha. Futhi okungekho okushiwo ukuthi uzama ukukwenza thola iseluleko esivelele somsebenzi kubhulogi yethu.
Ungabhekeleli abanye abambalwa indlela enhle kakhulu emkhathini ithuba lakho lokufundela eDreams.
Okubalulekile Kumsebenzi E-Dubai 2019
Ngokulandelana Imisebenzi eDubai 2019 nase2020. Yiba imakethe yanamuhla yemisebenzi yaseMiddle East ube yisibopho esikhulu kanye nomsebenzi wokuzibandakanya ngokuphelele. Ngakolunye uhlangothi, asikho isiqinisekiso noma isiqinisekiso ukuthola amathuba omsebenzi kakhulu kakhulu. Izitifiketi kanye nesitifiketi somsebenzi ngokuvamile zixhomeke ekuhlanganisweni kwezinqubo zokusesha imisebenzi. Kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani empilweni yakho a ukusesha umsebenzi e-UAE ngendlela ehlukile ngaso sonke isikhathi. Njalo gcina emqondweni wokuthi izindlela eziphumelelayo ziyindlela ezahlukahlukene. Futhi lapho kukhona amasayithi amaningi emisebenzi atholakalayo eDubai ukuthola imininingwane ngeDubai.
Eqinisweni, eceleni kwesilinganiso esiphezulu esilinganisiwe izinkundla zomsebenzi ku-UAE, kunezinye ezimbalwa. Futhi bonke banamandla abo nobuthakathaka babo ngisho noma engcono kakhulu angase akusize. Kodwa ukuveza ohlangothini oluhle ungabi ukwesaba ukuzama izinqubo ezihlukahlukene zokufuna umsebenzi omusha e-Dubai.
Ngokuvamile, i-Intanethi ibalulekile ku-Google Jobs & Imisebenzi e-Microsoft. Ekuhlaleni kokugcina, yiba ithuluzi elihle kakhulu labazingeli bemisebenzi e-Dubai City.
I-Kuwait - Okufanele
Ungayiqasha kanjani imoto phesheya (nokuningi). Umhlahlandlela We-Expats.
Imiphi imibhalo ye-Kuwait? I-Visa to Kuwait Lo mbhalo onikeza izakhamizi zasePoland ithuba lokuthi uthuthele esifundeni saseKuwait yivisa, engatholakala kwiNxusa laseKuwait eWarsaw. Enye indlela yokuthola idokhumenti (isikhathi esingekho ngaphezulu kwezinyanga ze-3) ukuyithenga esikhumulweni sezindiza eKuwait, ngaphandle kwemisebenzi eyengeziwe. Abaphethe i-visa yabavakashi ye-Kuwait bangaba kuphela abanikazi bepasipoti elivumeleke okungenani izinyanga eziyi-6 ukusuka ngosuku lokuhamba. Imali ye-visa yi-3 SD, inani layo eliguquguqukayo ezungeze i-35-40 PLN. Kuwait yini imali okufanele uyithathe? I-NFK Dinar! Umbono phezu kwe-Kuwaiti Bay yamabhishi, acwebezelayo lapho kushona ilanga, ezungezwe amanzi asePersian Gulf, ahlotshiswe ngezikebhe nemikhumbi ehamba ngomkhumbi ebuyela ethekwini, uzokhumbuleka isikhathi eside yilabo abazoba ithuba lokuncoma lombono ngamehlo abo. Ngaphezu kwalokho, uhambo oluya eKuwait luyithuba elihle lokubona iScience Center, indawo enkulu kunayo yonke indawo ese-Middle East, lapho izinhlobo zezidalwa zasolwandle ezazihlala e-Arabian Gulf, kufaka phakathi oshaka, zagxiliswa khona. Ukuze ubone zonke lezi zinto ezikhangayo ngamehlo akho, ngaphambi kokuhamba, kufanele ukhumbule impendulo yombuzo othi "Yimalini eyiKuwait?" - Imali ye-Kuwaiti izonikeza abahambi uhambo olunokuthula noluphephile.
Imuphi imali okufanele ngiyise eKuwait?